PPT - Xeeliga dooxada PowerPoint Presentation - ID:6540037
Xeeliga dooxadaPowerPoint Presentation
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/6540037" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
Xeeliga dooxada - PowerPoint PPT Presentation
Goolka waxbarasho Ardeygu waa in uu ; Qeexi karaa tilmaamina kraa xayawaanka ku nool wabiga xeeligiisa .. Qeexi karaa malayga iyo xayawaanka yaryar ee ku nool wabiga .. Sheegi karaa sob shimbruhu u heesaan waqtiga guga .
PowerPoint Slideshow about 'Xeeliga dooxada' - burton-rhodes
Ardeyguwaa in uu;
Sheegikaraa sob shimbruhu u heesaanwaqtigaguga.
Oreskog jiq ahi waa meel ay xayawaan badni sifiican oo nabad ah ugu noolaan karaan.
Grevling nabad ah ugu noolaan karaan.
Godkiisawaxauukasoobaxaamarka ay qoraxdudhacdosiuu u ugaarsado.
Dadkawaauukacabsadaa, sidegdegayuu u noqdaaooxuska gala markadadkaarko.
Buorm nabad ah ugu noolaan karaan.
Dhererkiisuwuxugaaraa 2 mitir.
Markauuxanaaqoaadayuu wax u qaniinaa.
Sun ma laha.
Waa uugabadaawaxaanuiskadhigaa wax dhintay.
Waxa kale oouucunaadooligaukuntashimbirahaiyoxayawaankayaryar. Waxauudhalaaukunwaxanuudhigaadhexdeeda.
Vannrotte: Dooli-biyood nabad ah ugu noolaan karaan.
Waxa kale oolooguyeeraadooli-dhuleed.
Dabaashaaadayuu u yaqaan.
Waxauudhalaailaashanilmo ah sedaexama afar jeer xagaaga.
Vannspissmus nabad ah ugu noolaan karaan.
Timoadagayuuwaxauukuleeyahaydabadaiyolugahadanbe. Waa u kufiicanyahaydabaashiyomuquurashada.
Dabadadheerwaxauu u sticmaalaasidiishukaantalugahadanbanasidiialwaaxdadoonyahamarkauudabaalanayo. Si fududayuubiyahadushooda u heehaaba.
Waxauukunoolyahay , cayayaanka, dirxiga, iyomalaygayaryar.
Nolosha biyo xidheenka nabad ah ugu noolaan karaan.
Dayrtii marka roobku dao,biyo ayaa gala biyo xidheenka.
Mar marka qaar malaay waaweyn oo xididada dhirta biyaha dhexdeeda ah Ayaan ku aragnaa.
Malaayga wabiga nabad ah ugu noolaan karaan.
Ninkaayaamarkahoreyimaadooqabtameelkuwanaagsan in ukunta la dhigo.
Meeshauguwanaagsaniwaaguntameelbiyoferesh ah oosocdaakajiraan.
Ta nabad ah ugu noolaan karaan. dhediga ahi dhowrwiigayeykadanbeysaalabka.
Naagtu god ayeykasamaysaaguntawaanaydhigtaaukunta.
Sjøørret nabad ah ugu noolaan karaan.
Qaarwaxa ay jecelyihiinwabiyadaiyoharahakuwanawaxa ay jecelyihiinbadda.
Kuwawebiyadaiyokuwabadduwaxyarayey kala duwanyihiinlaakiinwaaiskunooc.
Xayawaanada nabad ah ugu noolaan karaan. yaryaroobiyahakujira
Xayawaanadayaryarookunoolwabiyaduwaxa ay la qabsadeenbiyahasocda.
Qaarbadanooiyagaka mid ahi waxa ay leeyihii layman-mowjadeedyo u fududeeyasiaanaybiyuhu u qaadan.
Qarbadaniwaxa ay leeyihiinqoobab,qabsatooyiniyomadaiibadonuugeed ay wax kuqabsadaansiaanaybiyuhu u qaadan.
Qaarkoodwaxa ay isticmaalaandhagacyaryar say culays u yeeshaan.
Vårfluelarve nabad ah ugu noolaan karaan. Dirxigaduqsigu,eedka
Kuwokamidadirxi-duqsiyeedkuwaxa ay guryokadhistaandhagxaantayaryaroo ay gadaalugadhajiyaanqoridheersiuumowjaddasitoos ah iskugutaago.
Qaarwaxaytaxdaanshabaq ay kudhajistaandhagaxasalkahoosekuyaalla.
Døgnfluenymfe nabad ah ugu noolaan karaan.
Waxa ay leeyihiin gees ay wax ku dareemaan.
Waxa ay xagga danbe ku leeyihiin seddex dabo oo dun u eg.
Waxa ay leeyihiin dhisme yar oo ay u isticmaalaan baalal.Har små anlegg til vinger.
Steinfluenymfe nabad ah ugu noolaan karaan.
Waxa ay leeyihiin geesas dhaadheer oo ay ku wax ku dareemaan.Har
Waxa ay leeyihiin laba dabo oo dun u egg.
Dhismo ayey baalal u haystaan.Har
Waxay ku wareegaansalka hoose ee biyaha.
Snegler Alaalaxeey nabad ah ugu noolaan karaan.
Waxa ay isku nuugtaa oo isku dhajisaa dhagxaanta iyo qoryaxa xeelliga.
Ta la dhahoToppluesneglen Waxa ay la qabsatay oo ku nooshahay biyaha socda.
Knottlarve nabad ah ugu noolaan karaan. amaDirxibureedku
Waxa ay qaybtadanbeeejirkakudhajisaadhagxaanta, qoryahaiyoxididaddasalkakuyaalla.
Waxa ay afkakuleeyihiintimoyaryaroodhalaalayasi ay ugamiiraanwayaalahausooraacayabiyahaafkoodagalaya.Harsmåflimmerhårrundtmunnenfor å filtrereorganismer fra vannet.